ကောငျကလေးရေ … သူမကို တကယျခဈြရငျ…… – Shinyoon
ကောငျကလေးရေ … သူမကို တကယျခဈြရငျ……
ကောငျကလေးရေ … သူမကို တကယျခဈြရငျ ခဏခဏမငိုစပေါနဲ့ မကျြရညျတှကွေားမှာ တခြို့မိနျးကလေးတှကေ ဆုံးဖွတျခကျြတှခေတြတျတယျ ပွီးတော့ ပွတျသားသှားတတျတယျ မကျြရညျတှကွေားက ဆကျပွီးခဈြနတေဲ့ သူမကို ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ တနျဖိုးထားပေးပါ …
ကောငျကလေးရေ .. သူမကို တကယျခဈြရငျ ခဏခဏပဈမထားပါနဲ့ ပဈထားခံရတဲ့မြားလာတဲ့အခါ တခြို့မိနျးကလေးတှကေ Psycho ဝငျတတျတယျ ဘာကွောငျ့မြားငါ့ကို ပဈထားတာလဲဆိုတာမြိုး ငါက သူ့အတှကျ အရေးမပါတော့ဘူးလားဆိုတာမြိုးတှပေေါ့ အဲ့ထကျပိုဆိုးတာက သူမ တဈယောကျတညျး နနေိုငျသှားလိမျ့မယျ
ကောငျကလေးရေ … သူမကို တကယျခဈြရငျ သူစိမျးမိနျးကလေးတှနေဲ့ ဘယျတော့မှ မနှိုငျးပါနဲ့ ဘယျမိနျးကလေးမဆို သူ့ခဈြသူအတှကျ အကောငျးဆုံးပဲ ဖွဈခငျြတဲ့အတ်တရှိကွတယျ … အဲ့ဒီအတ်တကို ခမြနငျးလိုကျနဲ့အနှိုငျးခံလိုကျရတဲ့အခါတိုငျးမှာ … သူမကိုယျသူမ သိမျငယျသှားတတျတယျ
ကောငျမလေးရေ…သူမကို တကယျခဈြရငျ အားနညျးခကျြတှကေို မလှောငျပါနဲ့ ဖေးမပေး ပွုပွငျပေးရငျ ဘယျမိနျးကလေးမဆို ခဈြတဲ့စိတျနဲ့ ပွငျလာတတျကွပါတယျ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီအားနညျးခကျြကို ကိုယျအားကိုးမိတဲ့သူက လှောငျပွောငျလာတဲ့အခါ သူမ ဘယျလိုလုပျပွီး ခံနိုငျရညျရှိပါတော့မလဲ ပွငျလာမိမှာမဟုတျပဲ သူမ တဈသကျလုံး ဖုံးကှယျထားမိသှားလိမျ့မယျ
ကောငျကလေးရေ …. သူမကို တကယျခဈြရငျ မလိမျပါနဲ့ အခဈြတဈခုမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ယုံကွညျမှုဆိုတာ လိုအပျသလိုပဲ မိနျးကလေးတဈယောကျမှာလဲ ကိုယျ့ခဈြသူကို အနညျးနဲ့အမြားတော့ ယုံကွညျတတျကွတယျ အဲ့ဒီယုံကွညျမှုတှကေို ဖကျြဆီးခံလိုကျရတဲ့အခါ ယုံကွညျခငျြပါရဲ့နဲ့ မယုံကွညျရဲပဲဖွဈသှားတတျတယျ …
ကောငျကလေးရေ… သူမကိုတကယျခဈြရငျ သူမ မကျြလုံးတှကေို ကွညျ့ပါ … တဈခါတဈရံ ဘာအကွောငျးပွခကျြမှ မရှိပါပဲနဲ့ အားငယျနတေတျတယျ တဈခါတဈရံ ဝမျးနညျးနတေတျတယျ … တဈခါတဈရံ ရဈတတျကွသေးတယျ စိတျပကျြတဲ့ အပွုအမူမြိုးတှေ အတတျနိုငျဆုံးရှောငျပေးပါ မေးခှနျးမေးရငျး စိတျမရှညျတာမြိုးတှေ မဖွဈအောငျ နပေေးပါ ….
ဒီကောငျမလေးက သူ့ကိုသာခဈြပေးရငျ သူမကိုအဲ့ထကျပိုတိုးပွီးခဈြပေးမယျ့ကောငျမလေးမြိုးလေ … မငိုစပေါနဲ့ ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ ပြျောအောငျထားပေးလိုကျပါ ကိုယျပြျောအောငျထားပေးတာထကျပိုပွီး သူမက ပိုပွီးပြျောနတေဲ့ မကျြနှာလေးကွညျ့ပွီး ကွညျနူးတတျအောငျလကေ့ငျြ့ပါ ဒီလိုသိပျခဈြတတျတဲ့ကောငျမလေးကို အလိုလိုကျရကြိုးနပျပါတယျ … သူမက မငျးကို တဈသကျလုံးခဈြနမှော ….
သူမကို တကယ်ချစ်ရင် ….
ကောင်ကလေးရေ … သူမကို တကယ်ချစ်ရင် ခဏခဏမငိုစေပါနဲ့ မျက်ရည်တွေကြားမှာ တချို့မိန်းကလေးတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတတ်တယ် ပြီးတော့ ပြတ်သားသွားတတ်တယ် မျက်ရည်တွေကြားက ဆက်ပြီးချစ်နေတဲ့ သူမကို ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ တန်ဖိုးထားပေးပါ …
ကောင်ကလေးရေ .. သူမကို တကယ်ချစ်ရင် ခဏခဏပစ်မထားပါနဲ့ ပစ်ထားခံရတဲ့များလာတဲ့အခါ တချို့မိန်းကလေးတွေက Psycho ၀င်တတ်တယ် ဘာကြောင့်များငါ့ကို ပစ်ထားတာလဲဆိုတာမျိုး ငါက သူ့အတွက် အရေးမပါတော့ဘူးလားဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာက သူမ တစ်ယောက်တည်း နေနိုင်သွားလိမ့်မယ်
ကောင်ကလေးရေ … သူမကို တကယ်ချစ်ရင် သူစိမ်းမိန်းကလေးတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မနှိုင်းပါနဲ့ ဘယ်မိန်းကလေးမဆို သူ့ချစ်သူအတွက် အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ချင်တဲ့အတ္တရှိကြတယ် … အဲ့ဒီအတ္တကို ချမနင်းလိုက်နဲ့အနှိုင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာ … သူမကိုယ်သူမ သိမ်ငယ်သွားတတ်တယ်
ကောင်မလေးရေ…သူမကို တကယ်ချစ်ရင် အားနည်းချက်တွေကို မလှောင်ပါနဲ့ ဖေးမပေး ပြုပြင်ပေးရင် ဘယ်မိန်းကလေးမဆို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ပြင်လာတတ်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကို ကိုယ်အားကိုးမိတဲ့သူက လှောင်ပြောင်လာတဲ့အခါ သူမ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိပါတော့မလဲ ပြင်လာမိမှာမဟုတ်ပဲ သူမ တစ်သက်လုံး ဖုံးကွယ်ထားမိသွားလိမ့်မယ်
ကောင်ကလေးရေ …. သူမကို တကယ်ချစ်ရင် မလိမ်ပါနဲ့ အချစ်တစ်ခုမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုဆိုတာ လိုအပ်သလိုပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာလဲ ကိုယ့်ချစ်သူကို အနည်းနဲ့အများတော့ ယုံကြည်တတ်ကြတယ် အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကို ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အခါ ယုံကြည်ချင်ပါရဲ့နဲ့ မယုံကြည်ရဲပဲဖြစ်သွားတတ်တယ် …
ကောင်ကလေးရေ… သူမကိုတကယ်ချစ်ရင် သူမ မျက်လုံးတွေကို ကြည့်ပါ … တစ်ခါတစ်ရံ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိပါပဲနဲ့ အားငယ်နေတတ်တယ် တစ်ခါတစ်ရံ ၀မ်းနည်းနေတတ်တယ် … တစ်ခါတစ်ရံ ရစ်တတ်ကြသေးတယ် စိတ်ပျက်တဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပေးပါ မေးခွန်းမေးရင်း စိတ်မရှည်တာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် နေပေးပါ ….
ဒီကောင်မလေးက သူ့ကိုသာချစ်ပေးရင် သူမကိုအဲ့ထက်ပိုတိုးပြီးချစ်ပေးမယ့်ကောင်မလေးမျိုးလေ … မငိုစေပါနဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ပျော်အောင်ထားပေးလိုက်ပါ ကိုယ်ပျော်အောင်ထားပေးတာထက်ပိုပြီး သူမက ပိုပြီးပျော်နေတဲ့ မျက်နှာလေးကြည့်ပြီး ကြည်နူးတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါ ဒီလိုသိပ်ချစ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးကို အလိုလိုက်ရကျိုးနပ်ပါတယ် … သူမက မင်းကို တစ်သက်လုံးချစ်နေမှာ ….
ကိုယျ့ကို ပွုံးပွနတေဲ့မကျြနှာတှရေဲ့ တဈဖကျမှာ
တနျဖိုးထားပုံခငျြး ကှာတယျလေ. …